अपहरण भएको ३० दिनपछि झां दम्पतीको शव भेटियो !! | सुदुरपश्चिम खबर
अपहरण भएको ३० दिनपछि झां दम्पतीको शव भेटियो !!
जग्गा विक्री गर्न नमानेकै कारण हत्याः प्रहरी
जनकपुरधाम । महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–५, सहोडवाका ६५ वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी पत्नी ६० वर्षीया गीतादेवी १० फागुनको साँझ कान्छी बुहारी उषा झासँगै खाना खाएर सुतेका थिए ।
उषासँग गफिँदै अंशु ससुराको मुसाफिरको कोठा पुग्दा ओछ्यान देखिनन् । ‘रगत पानीले पखालेको जस्तो लागेपछि उनले प्रहरीलाई खबर गरिन् । प्रहरीले एउटै घरमा सुत्ने हुनाले कान्छी बुहारीमाथि अनुसन्धान ग¥यो, तर केही शंकास्पद विषय भेटिएन । झा दम्पतीको पनि अत्तोपत्तो थिएन ।
एक महिनापछि बिहीबार झा दम्पतीको शव पिपरा–२ मा गाडिएको अवस्थामा भेटिएको छ । शवलाई गलाउन नुनको पनि प्रयोग गरिएको छ ।
उनीमाथि अनुसन्धान केन्द्रीत भएपछि प्रहरीले जग्गाका मुख्य मालिक भारतीय नागरिक रहेका जग्गा व्यवसायी हरेन्द्र ठाकुरको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) र लोकेशनको विश्लेषण ग¥यो । त्यसक्रममा ठाकुर १० फागनुमा काठमाडौंबाट जनकपुरधाम आएर भोलिपल्ट फर्किएको देखियो । प्रहरीले ठाकुरलाई पनि काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर महोत्तरी पु¥यायो, तर, बयानमा उनले काठमाडौंबाट जनकपुर पुगेको स्वीकार गरेनन् ।
‘पोलिग्राफ शाखामा लगेर बयानको सत्यता परीक्षण गर्दा उनले ९९ प्रतिशत झुठो बोलेको देखियो’, प्रदेश प्रहरी प्रमुख धिरजप्रताप सिंह भन्छन्, ‘यसले उनीहरुको संलग्नता हुनसक्ने आशंकालाई थप बल पु¥याएको थियो ।’
ब्युरोले एक जना इन्स्पेक्टरको टोली अनुसन्धानमा खटाएको थियो । सीआईबीले पनि जिल्ला र प्रदेश प्रहरी कार्यालयकै टोलीको अनुसन्धानलाई सदर ग¥यो तर, झा दम्पतीको अवस्था अज्ञात रहृयो ।
झा दम्पतीको हत्या गरेर शव गाडेको वा पोखरीमा गह्रौ वस्तुले थिचेर राखेको हुनसक्ने प्रहरीको आशंका थियो । ‘हामीले महोत्तरी र धनुषाका ४२ वटा पोखरीमा खर्च गरिएको थियो भने केही पोखरीको पानी निकालिएको थियो’, सिंहले सुनाए, ‘खोजीमा ¥याफ्टिङ बोट पनि प्रयोग ग¥यो ।’
शंकास्पद ठाउँमा खोजीकै क्रममा प्रहरीको टोली बिहीबार झा दम्पतीको घरबाट दुई किलोमिटर पश्चिम–दक्षिणको पिपरा–२ मा पुगेको थियो ।
बगरमा खोस्रिएको देखिएपछि खनेर हेर्दा दम्पतीको शव भेटिएको डीआईजी सिंहले बताए । ‘शवको अवस्था हेर्दा अपहरणपछि तत्कालै हत्या गरेर गाडिएको जस्तो देखिएको छ’, उनले भने, ‘झा दम्पतीको शव छोरा मनिषकुमारले कपडा र पोतेका आधारमा सनाखत गरेका छन् ।’
सासू ससूराको शव फेला परेपछि अहिले परिवारमा सन्नाटा छाएको छ । जेठी बुहारी अंशु भन्छिन्, ‘सासु–ससुराको यस्तो हालत गर्ने व्यक्तिलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ ।’
गाईको घिउ हाम्रो शरीरको लागि औषधि : यस्ता छन् फाइदाहरू !!